phumla kwindalo kwii-Apennines - I-Airbnb
phumla kwindalo kwii-Apennines
Spervara di Sotto, Emilia-Romagna, Italy
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguAlessio
UAlessio ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uAlessio iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Untywiliselwe kwindawo ezolileyo yeTuscan-Emilian Apennines, kwilali yakudala yaseSpervara, iB&B La corte dei Cerri iyakuvuyela ukukwamkela kwiindawo zayo ezitofotofo, ikunika ithuba lokuchitha ixesha elide kude nombhodamo wesixeko phakathi kwamadlelo. , amahlathi, iintaba, imilambo namachibi.
Iiyure nje ezimbini ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseBologna, iyure enye ukusuka eModena naseReggio Emilia, iLa Corte dei Cerri yeyona ndawo ifanelekileyo yokuqalisa ukufumanisa izinto ezimangalisayo ezinokwenziwa ngummandla wethu.
Indawo yokuhlala inegumbi elinye lokuhlambela elinokusetyenziswa ziindwendwe zawo omabini amagumbi okulala. Kuhlala kusenzeka ukubhukisha yonke indawo yokuhlala ukuze isetyenziswe kuphela, ukuba akukho okunye ugcino
Sisoloko sifumaneka kwindlu esecaleni